tag: စိတ်ကူးမီးစက် | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 12, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ရောဘတ် Scoble ကနည်းပညာဘလော့ဂါများဘာပျောက်နေသလဲဟုမေးသည်။ မင်းရဲ့စီးပွားရေး။ အဆိုပါ post ကိုငါနှင့်အတူအာရုံကြောထိမှန်။ ရောဘတ်လုံးဝမှန်သည် ကျွန်ုပ်၏ RSS feeds နေ့စဉ်ဖတ်ရှုနေစဉ်၊ တူညီသောကင်လုပ်ခိုင်းကိုငါထပ်ခါထပ်ခါငြီးငွေ့နေသည်။ Microsoft နှင့် Yahoo! ထပ်ပြော ဦး မလား? စတိဗ်ဂျော့ဘ်က Apple ကိုဆဲဆဲလား။ Facebook သည်အဆတိုးများပြားလာသည်နှင့်အမျှကြော်ငြာမှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်ဆက်လက်ဆက်လက်ရှင်သန်နေ ဦး မည်လော။ အကြီးစား dot-com တစ်ခုစီကိုတည်ထောင်သူတစ် ဦး စီကဘာလုပ်နေသည်